eMasiixa ayaa lagu muujiyay - xagga Baristiisa Awoodda leh - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Suuradda Al-‘Alaq (Surah 96 – Dharka) wuxuu noo sheegaysaa in Eebbe ina baray waxyaabo cusub oo aanaan hore u aqoon.
Ee Dadka baray sida Qalinka wax loogu qoro.Dadkana baray waxayna aqoonin.
Suuradda al-Alaq96: 4-5
Suuradda Ar-Rum (Surah 30 – Roomaanka) waxay sii sharxaysaa in Eebbe sidaas ku sameeyo isagoo farriin u diraya nebiyada si aan u fahanno halka aan ku khaldanahay cibaadada Ilaah ee saxda ah.
Suuradda Ar-Rum30: 35
Nebiyadani waxay leeyihiin amar ka yimid xagga Ilaah si ay noogu sheegaan halka ay ku sugan yihiin cilaaqaadkeenna khaldan ee Ilaah, ha ahaato xagga fikirkeenna, hadalkeenna iyo dhaqankeenna. Nebi Isa al Masih NNKH wuxuu ahaa macalin noocan oo kale ah wuxuuna lahaa awood u gaar ah inuu ku kashifo xitaa fikradaheena gudaha si aan uga leexanno khalad kasta oo gudaha ka dhaca. Waxaan halkaan ku eegeynaa. Markaa waxaan eegnaa calaamadaha awoodda uu ku bixiyay mucjisooyinka bogsashada.
Ka dib markii Ciise Masiix uu jirrabay Shaytan (Iblis) wuxuu bilaabay inuu u adeego sidii nebi oo kale isagoo bari jiray. Waxbaridiisii ogu dheereeyd ee lagu qoray Injiilka waxaay ahayd wacdigii buurta dusheeda. Wacdigii buurta dusheeda oo dhamaystirana halkan,inakoo ku siinayno faahfaahinta hoos ku xusan,Ka dibna waxaan xiriir la yeelanaynaa wax bariddii Ciise Masiix,eek u saabsanayd waxa uu Nabi muuse ku sheegay Towreed.
Isa al Masih (PBUH) ayaa baray waxyaalaha soo socda
43 Waad maqasheen in la yidhi, Waa inaad deriskaaga jeclaatid oo cadowgaaga necbaatid, 44 laakiin waxaan idinku leeyahay, Cadowyadiinna jeclaada, u duceeya kuwa idin habaara, wax wanaagsan u sameeya kuwa idin neceb, oo Ilaah u barya kuwa idin caaya oo idin silciya, 45 si aad u ahaataan wiilashii Aabbihiinna jannada ku jira, waayo, qorraxdiisa wuxuu u soo bixiya kuwa xun iyo kuwa wanaagsan, roobna wuu u di’iyaa kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahaynba. 46 Waayo, haddaad jeceshihiin kuwa idin jecel, abaalkee baad leedihiin? Cashuurqaadayaashu miyaanay sidaas oo kale samayn? 47 Haddaad salaantaan walaalihiin oo keliya, maxaa dheeraad ah oo aad samaysaan? Dadka kale miyaanay sidaas oo kale samayn? 48 Saas aawadeed u samaada sida Aabbihiinna jannadu u san yahay.
Wacdigii Ciise ee buurta dusheeda
Isa al Masih (NNKH) wuxuu ku baray qaabka “Waad maqasheen in la sheegay… laakiin waxaan kuu sheegayaa…”. Qaab dhismeedkan marka hore ka soo xiganayaa Tawreed, ka dibna wuxuu ku fidiyaa baaxadda amarka ujeeddooyinka, fikradaha iyo ereyada. Ciise Masiix wuxuu wax baray isaga oo qaadaya awaamiir adag oo laga bixiyay Nebi Muuse (NNKH) wuxuuna ka dhigay xitaa kuwa aad uga adag sidii loo samayn lahaa!
Laakiin waxa kale oo cajiibka ah sida uu u waasaciyay ama u ballaadhiyay amaradii Tawreed. Wuxuu ku sameeyaa iyada oo ku saleysan awooddiisa. Wuxuu si sahlan u odhanayaa ‘Laakiin waxaan kuu sheegayaa…’ taasina waxay sii kordhineysaa baaxadda amarka. Tanina waxay ahayd hal shay oo gaar u ahaa waxbarashadiisa. Sida Injilku sheegayo markuu dhammeeyay Khudbaddan
28 Waxaa dhacay goortii Ciise hadalladan dhammeeyey, in dadkii oo dhammu waxbariddiisa la yaabeen, 29 waayo, wuxuu wax u barayay sida mid amar leh oo uma uu baraynin sida culimmada.
Matayos 7: 28-29
Runtii, Ciise Masiix wuxuu wax barayay sidii qof awood weyn leh. Inta badan nebiyada waxay ahaayeen Fariin wadayaal faafiyo fariinta ka timid xagga Eebe, laakiin way ka duwanayd. Waa maxay sababtuu Ciise Masiix u sameeyay tan?Sidaan ku soo aragnay halkan Darajadii Masiixa lagu siiyay Sabuurka oo soo socoto. Wuxuu lahaa awood weyn. Sabuurradii 2 ee Axdiga hore, halkaas oo Awooda Ciise Markii ogu horeeysay la sharraxay Eebe wuxuu kula hadlaya Ciise Masiix sidan:-
I bari oo waxaan dhaxal ahaan kuu siin doonaa quruumaha,
Sabuurradii 2: 8
Masiixa waxaa lasiiyay amar uu ku xukumo quruumaha, xataa tan iyo dhulka darfihiisa. Sidaa daraadeed sida uu masiixa u leeyahay awood uu wax ku baro habka uu u sameeyay..
Nabiga iyo Wax baridii buurta
Xaqiiqdii, sidaan halkan ku aragnay Taurat, nebi Muuse wuxuu saadaaliyay imaatinka ‘Nabiga’, kaasoo lagu xusi doono habka uu wax u baray. Muuse ayaa qoray
18 Waxaan iyaga walaalahood uga dhex kicin doonaa nebi sidaada oo kale ah, oo markaasaan afkiisa gelin doonaa erayadayda, oo isna wuxuu iyaga kula hadli doonaa wax alla waxaan isaga ku amri doono oo dhan. 19 Oo waxay noqon doontaa in ku alla kii aan maqlin erayadayda uu magacayga ku sheegi doono, isagaan weyddiin doonaa.
Sharciga Kunoqoshadiisa 18: 18-19
Isagoo baraya qaabkii uu u baray, Ciise wuxuu adeegsanayay awoodiisa Masiix isagoo fulinaya wax sii sheegistii Muusena ee Nabiga soo socda oo si weyn wax u bari doona. Waxayna labaduba ahaayeen Masiixa iyo Nabi.
Adiga iyo aniga iyo wacdintii buurta
Haddii aad si taxaddar leh u akhrido Wicitaankan Buurta ku si aad u aragto si aad u addeecdo markaa inaad jahwareersan tahay. Sidee qof ugu noolaan karaa amarrada noocaan ah ee ka hadlaya qalbiyadeenna iyo ujeeddooyinkeenna? Maxay ahayd Ciise wacdintiisan? Jawaabta waxaan ka arki karnaa gabagabadiisii wacdigiisa.
Saas aawadeed u samaada sida Aabbihiinna jannadu u san yahay.
Waxaan had iyo jeer u maleyneynaa in laga yaabo inay si fudud uga wanaagsan yihiin camalka xun – taasi way ku filnaan doontaa. Hadday taasi dhacdo, oo Eebbe ha inaga yeelo Jannadiisa, waxaan baabi’in lahayn dhammeystirka Jannada oo waxaan u rogi karnaa khaladaadka aan ku hayno adduunkan. Waa damacayaga, damacnimada, xanaaqa ee maanta nolosheena burburiyay. Haddaan aadno Janada inagoo weli haysano damacaas, cadhada Jannadaas si dhakhso leh ayey u noqon doontaa sida adduunkan –ibaatooyinkan aanu inaga sameeynay.
Xaqiiqdii, waxbadan oo wax barida Ciise Masiix waxay diiradda saarayeen gudaha qalbiyadeena halkii ay ka ahaan laheyd xaflada banaanka. Tixgeli sida,uu wax barida kale, uu diiradda saarayo gudaha. qalbigeenna
20 Wuxuuna ku yidhi, Waxa ninka ka soo baxa, kuwaas weeye waxa ninka nijaaseeyaa. 21 Waayo, waxan weeye waxa qalbiga dadka gudihiisa ka soo baxa fikirrada shar leh, iyo galmada xaaraanta ah, iyo tuuganimada, iyo dilidda, 22 iyo damacnimada, iyo sharka, iyo khiyaanada, iyo camal xumaanta, iyo il xun, iyo cayda, iyo kibirka, iyo nacasnimada. 23 Waxyaalahan shar leh oo dhammu gudahay ka soo baxaan oo ninka nijaaseeyaan.
Sidaa daraadeed daahirsananta gudaheena aad ayey muhiim ugu tahay heerka loo baahan yahay ee kaamilnimad. Eebbe wuxuu kuwa dhabta(kaamilka) u ogolaadaa doonaa Janada Kaamilka ah. Laakiin inkasta oo taasi u ekaan karto caqli ahaan aragtideeda waxay kicineysaa dhibaato weyn: Sideen ku geli karnaa Jannada haddaannaan kaamil ahayn? Suurtagalnimada innaga oo aan dhammaystirnayn oo dhammaystiran ayaa noo keeni kara rajo la’aan.
Laakiin taasi waa waxa uu doonayo! Markaan ka rajo dhigno inaan waligeen wanaag ku noolaano, markaan joojino aaminaadda waxyaabaha aan gaarno, markaas waxaan noqonnaa ‘ruux liita’. Ciisa Masiix wacdigiisa wuxuu ku bilaabay oo yidhi:-
“Waxaa barakaysan kuwa saboolka ka ah xagga ruuxa, waayo, boqortooyada jannada iyagaa leh”
Matayos 5: 3
Bilowga xigmaddeena ma aha inaan meesha ka saarno waxbarisyadan oo aan annaga ina khuseynayn. Way sameeyaan! Heerkan ayaa ah‘ in la noqdo kaamil’. Maaddaama aan u oggolaanay in heerkaas uu ku soo dhex galo, oo aan garowno in aannan awood u lahayn arrintaas, markaa waxaan bilaabaynaa dariiqa toosan. Waxaan bilaabeynaa dariiqa toosan maxaa yeelay, annaga oo aqoonsanna wax qabadkeena, waxaa laga yaabaa inaan diyaar u nahay inaan aqbalno caawimaad marka loo fiirsho haddii aan u maleynno inaan ku aqbali karno wax u qalmi taankeena.
Tags:?casharadii Isa al Masihcilmiga Waa maxaydhaawacadhambaal al masihfarriin isaheerka ilaahay ee kaamilnimadaInjil la soo bandhigay Tafsiir alxamdulilaahisa al masihisa al masih iyo khudbada buurtakhudbad buurtakitabmasihmuxuu aasaasay al masih ?muxuu yidhi?muxuu yiri al al masih?waa al masih in injil